Senator Faroole oo eedeyn u jeediyay Madaxweynaha Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Senator Faroole oo eedeyn u jeediyay Madaxweynaha Somalia
Tuuryare 25 April 2019
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay faragelin ay ku sameysay doorashooyinkii maamulka Puntland, islamarkaana wali ay dhibaato ku heyso qaar ka mid ah maamul goboleedyadda dalka ka jira.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale xukuumadda Federaalka ku eedeeyay in ay fara-gelin ku hayso doorashooyinka dowlad goboleedyada, isagoo tusaale u soo qaatay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu sheegay in fara-gelintii xukuumaddu ku samaysay ay ka dhalatay dhibaato iyo fidno lagu laayay dad aan waxba galabsan.
“ Dastuurkii la isla raacay oo Federaalka ahaa oo qabyada ahaa, wadadu ku socdaa maaha wadda saxa ee waa qaldanyahay, wax ka hagaagayna ma jiraan, afartii sano ee dowladda Federaalka ah maadxweynaheeda iyo Baarlamanadeeda la doortayna, waxaa ka haray mudda laba sano ka yar, wax Dastuura oo maanta jiraana ma jiraan” ayuu yiri Faroole.
Senator Faroole ayaa xusay in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirto nidaamka Federaalka ee dalku qaatay, balse aan cidna laga yeeli doonin in ay burburiso hannaankii umadda Soomaaliyeed ku heshiisay ee Federaalismka.
US military and Ghanaian leaders discuss on ways to assist Ghana
Dagaal Culus oo ka dhacay Duleedka Afgooye